नेकपा एमाले नामको दल दर्ता गर्ने हो? एक वर्ष कुर्नुस्, सम्भव छ – MySansar
नेकपा एमाले नामको दल दर्ता गर्ने हो? एक वर्ष कुर्नुस्, सम्भव छ
Posted on June 10, 2018 by Salokya
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नामको नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। नयाँ दल दर्ता भइसकेपछि छाडिसकेको नाम के हुन्छ त? के अरु कसैले दर्ता गर्न पाउँछन् त? धेरैलाई योबारे जिज्ञासा लागेको होला।
यसबारे कानुनी प्रावधान खोजी गर्दा तत्काल यो सम्भव नभएको देखियो। तर अर्को चुनावसम्ममा भने कसैले नेकपा एमाले नामको ब्रान्ड बनिसकेको नाममा दल दर्ता सम्भव हुने रहेछ। कसरी? कानुनी प्रावधान यस्तो छ।
सबभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगले ने क पा दर्ता गर्दा दिएको पत्र हेरौँ। यो पत्रमा
एकीकरण भई माग गरेको बाहेकका नाम, झण्डा र चिह्न कुनै दलले प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ यसमा। अर्थात् अब नयाँ दलले माग गरेको एमालेको सूर्य चिह्न उसले प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यसबाहेक नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चुनाव चिह्न कुनै पनि दलले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। मिडियामा यही खबर आयो।
त्यसपछि भने यो प्रतिबन्ध हट्छ। कसैले पनि नेकपा एमाले नामको प्रयोग गरी दल दर्ता गर्न सक्छन्।
ल है, कसैलाई नेकपा एमाले नामको दल दर्ता गर्न मन छ भने २०७६ जेठ ३ गते निर्वाचन आयोगमा लाइन बस्न गइहाल्नुस्। सम्भव छ।
तर के थाहा, दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले यो उपदफा नै संशोधन गरी परिवर्तन गर्न पनि सक्छ। अथवा निर्वाचन आयोगमा आफ्नै कोही मान्छेलाई यो नामको दल दर्ता गर्न लगाएर होल्ड गरिराख्न पनि सम्भव छ।
एक वर्ष त छिट्टै बितिहाल्छ, हेरौँ न त कसले के गर्दा रहेछन्। रमाइलै हुन्छ। कि कसो?